Ostreliya - ALinks
Zithini iindleko zokuhlala eOstreliya?
January 10, 2022 IShubham Sharma Ostreliya, imali
Iindleko zokuhlala e-Australia zabaphambukeli zixhomekeka kwizinto ezahlukeneyo. Ezi zinto zinokwahluka kakhulu kwimfuno yomntu ngamnye. Ubungakanani bosapho, isixeko, ubungakanani bokubekwa kwenye indawo, indlela yokuphila, ukutya, kunye nezinye izinto ezinje
Uyifumana njani i-visa eOstreliya?
Novemba 11, 2021 UAntika Kumari Ostreliya, ivisa
Kuya kufuneka ube nevisa yaseAustralia yokuhamba, ukufunda kunye nokusebenza e-Australia. Awuyidingi ngaphandle kokuba ungumnini wepasipoti wase-Australia. Ke ukuba ufaka isicelo seVisa yaseAustralia, jonga. Umgaqo-nkqubo wevisa
Elona xesha lilungileyo lokutyelela i-Australia !! Nasi isikhokelo sayo!
Disemba 26, 2020 UKaruna Chandna Ostreliya, hamba
I-Australia lelinye lawona mazwe makhulu ehlabathini. Kodwa naphi na apho uya khona, kuxhomekeke apho uya khona. IGreat Barrier Reef ithandwa kwihlabathi liphela. Kwiilwandle ezinkulu zaseSydney. Inabanye abahambi abathengisayo. Ukutyelela iAustralia Yazi
Uyifumana njani indlu eAustralia?
Novemba 25, 2020 UAntika Kumari Ostreliya, izindlu
Izindlu, ngakumbi kwiidolophu ezinkulu, zinokubiza kakhulu e-Australia. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kukhetho lwakho lobomi kunye nohlahlo-lwabiwo mali, kukho iindlela ezahlukeneyo zokuhlala onokukhetha kuzo kwingingqi. Amakhaya azimeleyo, iindawo ezixineneyo, ii-duplexes, izindlu zedolophu, kunye neeyunithi zokuhlala
Ukuhamba i-Australia Cheaper kunye nokuTshintsha
Ngamana 28, 2020 IShubham Sharma Ostreliya, hamba
Izithuthi zikawonke-wonke e-Australia zibonelela ngeendlela ezine eziphambili: uloliwe, ibhasi, isikhephe, nololiwe olula. Ayizizo zonke izixeko ezinomlambo okanye inethiwekhi yamazibuko ukuze ke imilambo ingafumaneki kwaye uloliwe okhanyayo (owaziwa ngokuba ziitram) akasasebenzi e
Ngamana 24, 2020 IShubham Sharma Ostreliya, impilo
Inkqubo yokhathalelo lwempilo e-Australia yaziwa ngokuba yenye yezona zinto zibalaseleyo emhlabeni. Abemi baseOstreliya bafumana ukufikelela kwiinkonzo zasimahla zempilo. Ezinye iinkonzo zokhathalelo lwempilo zikwathengwa kakhulu kwaye zikhuselekile. I